Volavolan-tsolika vy tavoahangin-bolam-bolam-bolan-tsolika 5000psi, Shina Bolibolina karibon-bolam-bolan'ny solika 5000psi mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (valiny Titan no marika anay)
HFT Bolted Body Carbon Steel oilfield ball valves ho toy ny andraikitra lehibe amin'ny fidinana an-dàlana amin'ny alàlan'ny famolavolana voamarina. Valvelovin'ny bolongolan'ny tanety karbaona HFT Bolted Body Carbon dia manana rafitra kaody miloko ahafantarana azy mora foana. Fanosorana menaka manitra ho an'ny fanosorana mora sy fitaovana fanidiana enta-mavesatra mavesatra hisorohana ny fandidiana tsy nahy.
HFT Bolted Body Ductile Iron oilfield ball valves dia manome valves ny valin'ny valin'ny solika manomboka amin'ny 1 "ka hatramin'ny 4" ary hatramin'ny 5000 psi. Fananganana vatam-baravarana izay azo ianteherana ambony.
● Vatana Carbon WCB / 4C Vatana
● loko matevina
● Fanamboarana vatana
● Seza Delrin
2 Tombo-kase Viton
6 SAMPA SS 304
7 Bearing Bearing PTFE
8 Tombo-kase Viton
9 Tombo-kase Viton
10 Mitondra tohatra PTFE
11 Atsaharo ny vozon'akanjoko Inôksa
12 Pin amin'ny Screw Inôksa
14 Ajanony ny bolt A193 B7
15 Volana fikolokoloana A193 B7
17 Hazavao A395 Iron vy
18 Vatam-batana ASTM A193 B7M
Size Color WP d D D2 L H L0 Lanjan'ny LBS